Indlu ene-pool kunye negumbi lemidlalo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarco
UMarco unezimvo eziyi-109 zezinye iindawo.
Ikhaya elimangalisayo, lokuza nosapho okanye nabahlobo.
Le villa inamagumbi okulala amabini anebhedi ephindwe kabini, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela elinebhafu kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Indlu inebhedi yesofa enye yabantwana aba-2 ukuya kwi-12 leminyaka ubudala. Ungabeka ibhedi ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, i-oveni, isitovu seceramic, umenzi wekofu, itoaster kunye neketile yombane.
Indlu yonke ine-intanethi, ukufudumeza okuphakathi kunye ne-cable tv.
Ikwanayo nendawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuhlamba kunye nokomisa.
Ngaphandle, inendawo yokuhlala entle, enetafile kunye nesofa, ilungele ukuphumla kwaye ukonwabele imvakwemini elungileyo, kunye nendawo yebarbecue.
Ungayonwabela ichibi elineemitha ezisi-8 ubude kwaye usenegumbi lemidlalo elineebhiliyoni, itafile yeping-pong kunye neebhayisekile zokukhwela ujikeleze ubumelwane.
Qaphela: Ukusetyenziswa kwebhedi ye-sofa kubantwana aba-2 ukuya kwi-12 yeminyaka ubudala kuneendleko ezongezelelweyo ze-€ 15 (kwixesha eliphezulu) kunye ne-€ 10 (ngexesha eliphantsi), kumntwana ngamnye kunye nobusuku ngabunye.
Qaphela: kwi-check-in iyafuneka isixa se-€ 100 yediphozithi.
Qaphela: Ubukho bechibi ngaphandle kwexesha lasehlotyeni kufuneka buqinisekiswe.
Inombolo yomthetho: 37426/AL